पार्टी एकतामा एमालेसँग कि माओवादीहरु बीच ? | नेपाल आज
Tuesday 23 October 2018 | मङ्गलबार, ०६ कार्तिक २०७५
पार्टी एकतामा एमालेसँग कि माओवादीहरु बीच ?
केदारनाथ नेपाल (निश्चल)
बिहिबार, २० पुष २०७४ गते प्रकाशित
- नेपाल आज (NP)
असोज १७ गते एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा माओवादीलाई ४० प्रतिशत हिस्सा दिने सहमति गर्दै दुई पार्टी सँगै निर्वाचनमा होमिएका थिए । निर्वाचन पश्चात् पार्टी एकिकरण गर्ने विश्वास जनता र आफ्ना कार्यकर्तालाई दिलाउदै निर्वाचनमा होमिएका उनिहरुले निर्वाचनमा सफलता पनि हाँसिल गरे । त्यस राजनीतिक दृश्यले देश भित्र र बाहिर भूँइचालो नै गएको थियो । गठबंधन बाट सुरु भएको एमाले माओबादीको यात्रा पार्टी एकता सम्म पुग्नेमा भने अहिले अन्योलता छाएको छ । यदि अहिलेको गठबंधन सफल भएमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास सुनौलो अक्षरले लेखिने पक्कापक्की छ । तर, वाम गठबन्धन पार्टी एकतासम्म नपुगी विचमै तुहियो भने त्यो पनि इतिहास बन्ने नै छ, कस्तो बन्छ भन्ने गठबन्धनधारीलाई जगजायरै होला ।
नेपालमा कमिन्यूष्टहरु मिलेर बस्न सक्दैनन् । बेला–बेला कमिन्यूष्ट पार्टीभित्र भएको टुट र फुटले पनि यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ । २००६ सालमा पुष्पलालले भारतको कलकत्तामा रहेर गठन गरेको नेपाल कमिन्यूष्ट पार्टीको नाम बाट खोलिएका पार्टी मात्र कुनै समय नेपालमा करिब एक दर्जन पुगिसकेका थिए । यसपटक एमाले माओबादी लगायत अन्य दलको एकताले त्यसलाई कम गर्ने कोशिस समेत गरेको छ । जनमतको हिसाबले पानि नेपालमा करीब ७० प्रतिशत मत कमिन्यूष्टको पक्षमा छ । तर कमिन्यूष्ट पार्टीभित्र बेला बेलामा भैरहने टुट फुटले पनि उनीहरुले बहुमतको दीर्घकालीन सरकार निर्माण गर्न सकिरहेका थिएनन् । तर यसपटक उनिहरुलाई स्थिर सरकार निर्माण गर्ने अवसर पनि छ ।
यसपटक बाम एकताको रटान लगाएर माओबादीले आफ्नो इतिहास पुर्ण रुपमा मेटाएर पार्टीलाई एमालेकरण गर्दैछ, भने एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जबज लाई रद्विको टोकरीमा मिल्काएर ओलीबादलाई स्थापित गर्ने कोशिश पनि गर्दैछ ।
निर्वाचन अघि नेपाली राजनीतिक इतिहासमा माओवादी– एमाले गठबन्धन कमिन्युष्ट एकताको केहि बलिया आधार सहित अगाडि आएको थियो । तर, निर्वाचन पश्चात् शक्ति सन्तुलनको बिषयलाई लिएर पार्टी एकताको बिषयमा बिस्तारै पिकअप कम हुदै गएको आभाष भैरहेको छ ।
हुनत संविधान जारी भएसँगै माओवादी – एमाले गठबन्धनको संयुक्त सरकार बनेको थियो । त्यतिबेलै पनि प्रचण्ड र ओली बीच तत्कालको लागि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र भविष्यमा पार्टी नै एकता गर्ने भन्ने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक बेईमानीका कारण उक्त गठबन्धन एक बर्ष पनि टिक्न सकेन ।
वाम एकताको बिषयमा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना आश्चर्यजनक रुपमा एक्कासी एकताको हल्ला चलाईएको छ । आ९आफ्नो स्वार्थको लागि चुनावी एकता त भयो तर, को शक्तिमा रहने भन्ने बिषयलाई लिएर पार्टी एकता हुनेमा भने पूर्ण शंका नै रहेको छ ।
हुन त नेपालमा कमिन्यूष्ट पार्टीभित्र एकै दलका नेताहरु पनि आपसमा मिलेर बस्न सकेको देखिदैन । पार्टी एउटा भएपनि त्यसभित्र गुट र उपगुटहरु छन् । त्यसमा पनि दुई ठुला प्रतिस्पर्धी दल एमाले माओवादी वीचको गठबन्धन पनि लामो समय टिक्नेमा शंका नै छ । दुई दलबीचको शक्ति सन्तुलन, सांगठनिक संरचना, कार्यदिशा र पदीय भागभण्डा जस्ता बिषय पार्टी एकिकरणको लागि बाधक बन्ने देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि माओवादीले त दश बर्षे जनयुद्वको गर्विलो इतिहास बोकेको छ । दश बर्षे युद्वलाई उसले जनयुद्व ठान्छ । एमालेले जनयुद्वलाई हिंसात्मक गतिविधि भन्दै आईरहेको छ । यहि पनि एउटा कारण हुनसक्छ अर्को कारण भनेको बाहिर जे बोले पनि एमालेले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिकता जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई भित्र देखि स्वीकार गरेको छैन । अझ एमाले र पूर्व राजा वीच बेलाबेलामा गोप्य भेटवार्ता हुँदै आएको चर्चा पनि सुनिन्छ । त्यसकारण, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चुनावी भएपनि पार्टी एकता हुनेमा गम्भीर शंका छ ।
इतिहास हेर्ने हो भने एमालेले बिभिन्न समयमा अन्य दलहरुलाई धोका दिँदै आईरहेको छ । अर्थात धोकाको अर्को नाम एमाले भन्दा हुन्छ । स्पस्ट रुपमा भन्दा पशुपति प्रकरण र सेनापति प्रकरणमा एमालेले माओवादीलाई धोका दिएकै हो । अझ ओली सरकार निर्माणको समयमा एमालेबाट माओवादीलाई भएको धोका ताजै छ । त्यसकारण यसपटकको सहमति पनि पालना हुने बलियो आधार नै देखिदैन ।
दुई तिहाई मत रहदाँ रहँदै पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित बामपन्थी शक्तिहरु एक हुनु पक्कै पनि देशको लागि भने शुभ संकेत हो ।
सँगै जनयुद्व लडेर माओवादी पार्टीलाई एउटा ऊचाईमा पुर्याएर छुट्टै पार्टी गठन गरेका बैध, बिप्लव र बाबुरामसँग माओवादी केन्द्रको एकता हुन नसक्ने तर, द्वन्दकालदेखि नै एक अर्काका राजनीतिक शत्रु र शान्ति प्रकृयाका एक अर्काका राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेको एमालेसँग एकता प्रस्ताव आउनुले माओवादीका आम कार्यकर्ता आश्चर्यमा परेका छन् । त्यो सँगै यसअघि पटक–पटक पार्टी विभाजित हुँदा वैद्य, विप्लव र बाबुरामलाई दोषी देख्ने कार्यकर्ताले समेत यसपटक बाम एकताको बिषयलाई लिएर प्रचण्डमाथि नै गम्भीर शंका गर्न थालिसकेका छन् । कि, प्रचण्ड कुनै अदृश्य शक्तिद्वारा परिचालित त छैनन् रु
शान्ति प्रकृयामा आउदै गर्दा नेतृत्वले गल्ती गरेकै हो । र यसपटक वाम एकताको नाममा आफ्नै इतिहास मेटाउने ठुलै गल्ती गर्दैछ माओवादी नेतृत्वले । २०६३ मंसीर ३ गते सरकारसँग बृहत शान्ति सम्झौता गर्ने नाममा दश वर्ष देखि चल्दै आएको सशस्त्र संघर्ष आजैका मितिदेखि अन्त्य गरियो भन्ने प्रस्तावमा प्रचण्डले सहीछाप गरे । त्यहीबाट माओवादीको इतिहास मेटाउने काम शुरु भयो । संसदीय व्यवस्थालाई प्रधान शत्रु मानेर सुरुवात गरिएको जनयुद्धको अन्त्य संसदीय व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरेर अन्त्य गर्नुले नै माओवादी आत्मसमर्पणवादको बाटोमा लागेको पुष्टि हुन्थ्यो । त्यसै क्रममा जनमुक्ति सेनाको विघटन गराइयो । हतियारहरु प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बुझाइयो । र २०५७ सालमै दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्णय गरिएको संविधान सभाको कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो संविधान सभामा भाग लिएर संविधानसभा मार्फत महान् नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसाथ गठन गरिएको र माओवादीकै बढी संख्या रहेको संविधानसभालाई माओवाीदीकै सरकार रहेको बेलामा बिघठन गराईयो ।
कमिन्यूष्टहरुवीच एकता हुनुपर्छ । तर, यहाँ पार्टीले आम कार्यकर्ताको भावना विपरित हतारमा निर्णय गरेको माओवादी कार्यकर्ताको आरोप छ । उनिहरु चाहान्छन् एकता एउटै पार्टीमा रहेर राज्यको ज्यादती बिरुद्वसँगै जनयुद्व लडेका बैद्य, बिप्लव र बाबुरामहरुसँग होस् । प्रतिगामिको मतियार एमालेसँग होईन । यसपटक बाम एकताको रटान लगाएर माओबादीले आफ्नै इतिहास पुर्ण रुपमा मेटाएर पार्टीलाई एमालेकरण गर्दैछ । यो बाम एकता होईन बरु माओबादीको जनयुद्व र जनयुद्वका शहिद, अपाङ्ग र जनताप्रतिको धोका र गद्वारी हो ।
बिजोग भो बैद्य बा !
बिहिबार, ३० बैशाख २०७३
कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह माओवादी
शनिबार, ०१ जेठ २०७३
विदेशबाट राष्ट्रपतिलाई पत्र–हाम्रो मदनको हत्या छानबिन गरिदिनुहोस्
शनिबार, २२ जेठ २०७३
यसकारण पर्नेछ तपाईंको छनोटमा फक्सवागनको ‘पोलो १.०’ कार
चितवनमा आकर्षक जग्गा बिक्रीमा
सन्दीप लामिछाने अष्ट्रेलियाको बिग बास खेल्ने
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा नेपाली गायिका सरस्वती खत्रीको प्रशंसा
अब कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छः नेता साउँद
नेकपा सचिवालय बैठकः प्रवक्तामा नारायणकाजीकै निरन्तरता
कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फेरि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू
तपोवनमा स्वामी आनन्द अरूणको सुक्रकिट प्रसादको रुपमा प्रयोग हुन्छः अंशु कविरा (भिडियोसहित)
अब नापी र मालपोत शुद्धीकरण अभियान झन् सशक्त हुन्छः मन्त्री अर्याल
फेरि आइजिपी खनालले भने, ‘नमूना प्रहरी संगठन बनाएरै छाड्छु’
अब सडकमा सुत्नेलार्इ कारवाही गरिने !
नेता नेपालको सुझाव– प्रधानमन्त्री ज्यू, बलियो डन्डा लिएर अघि बढ्नुहोस्